စီးပွားရေးတစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆို အရင်ဆုံး သုတေသနလုပ်ပါ
ကိုယ်လုပ်မည့် စီးပွားရေးအကြောင်း သေချာလေ့လာလိုက်စားပါ။
အပြိုင်အဆိုင်များလား။ လူတွေတကယ်လိုရဲ့လားဆိုတာ ဆန်းစစ်ပါ။
အတတ်နိုင်ဆုံး အမြတ်ကို အရမ်းမကြည့်မိပါစေနဲ့။ လူတွေအဆင်ပြေအောင် ကိုယ့်ရဲ့အကူအညီကိုလက်ခံအောင် အရင်ကြိုးစားပါ။
အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ လူတွေကို အဆင်ပြေအောင်ကူညီနေတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။
အဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သာ အလုပ်လုပ်ရင် အောင်မြင်မှာပါ။
ကိုယ်တွေက စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆို ဘွားခနဲ အကြီးကြီး အပြည့်အစုံလုပ်ချင်ကြတာ။
ကိုယ့်မှာ ၁ သောင်းပဲရှိရင် ၁သောင်းနဲ့စပါ။ ပစ္စည်းအပြည့်အစုံမရှိတောင် ရှိတာနဲ့အရင်လုပ်ပါ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သုံးရမှာက ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူး။ လုပ်အားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရပါမယ်။ ပိုက်ဆံကိုတတ်နိုင်သမျှချွေတာပါ။
ပြီးတော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ချဲ့..ချဲ့သွားရမှာပါ။
စစချင်းကတည်းက ပိုက်ဆံတွေကို မတန်တဆအတိုးတွေနဲ့ချေး အလုပ်သမားတွေငှား ပစ္စည်းအပြည့်အစုံဝယ်၊ တစ်ပတ်လောက်လည်းကြာရော အရင်းပြုတ်တဲ့အပြင် အကြွေးတောင်တင်သွားမယ်နော်။
စီးပွားရေးကို တဖြည်းဖြည်းချင်းစသင့်ပါကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
Read 588 times Last modified on Wednesday, 06 February 2019 11:22
Economic research is going to act first
အလုပ်ကို ရောက်ရောက်ချင်း ပထမဆုံး (၁၀) မိနစ်ကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးသင့်လဲ?
Master အရင်တက်ရမလား?? အလုပ်အရင်လုပ်ရမလား??
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပညာသင်ဆုပေးမည်
ကျောင်းစာညံ့သူတွေက ဘ၀မှာ ပိုအောင်မြင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၄) မျိုး
AVSS Myanmar မှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သြစတြေးလျပညာရေးပြပွဲ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ
Sayar Ma-Ma Htay
Royal Business Institute